Rayaale muxuu kaga jawaabayaa haddii Tallaabo ku dhinto Qolkaa yar?” Dr. Gaboose | WWW.SOMALILAND.NO
Rayaale muxuu kaga jawaabayaa haddii Tallaabo ku dhinto Qolkaa yar?” Dr. Gaboose
Posted on Agoosto 6, 2008 by Weriye2
Hargeysa 06.08.08, “Qof kasta oo reer Somaliland ah arrintani waxay ku dhalisay argagax. waxay taabsiisay murugo, nin ka naxay mooyaane, ma filayo ma filayo inuu jiro nin ku farxay, doqon mooyaane. Yuusuf Talaabo waa muwaadin, waa Mujaahid, kollay anigu dhankayga iyo dhanka inta waxgaradka ahba, waxaanu aaminsanahay oo aanu la jecelahay nolol wanaagsan, sharaf iyo karaamo. waxaanu rajaynaynaa si dhakhso ah inuu meesha uga soo baxo. Isla-markaana waxaan ku baaqayaa in loo gurmado. waxaa nasiib darro ah xukuumada uu u shaqaynayay ee uu waliba safka koowaad kaga jiray daacadnimadeedu, inay u quudhay Wasiirkeeda inuu xaaladaas oo kale galo.” Sidaas waxa yidhi Gudoomiyaha Ururka Qaranka, Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka hadlay aragtida uu ka qaatay qaylo-dhaantii Wasiir ku-xigeenka Wasaarada Cadaaladda Yuusuf Ciise Talaabo uu kaga hadlay xaalada uu ku sugan yahay xilligan oo uu joogo magaalada Addis Ababa.
Dr. Gaboose wuu ka sii hadlay arrintaas waxaanu yidhi; “Aniga dhakhtar ahaan damqasho gaar ah ayuu I geliyay warkaasi. wuxuu yidhi Dhiig-kar baan leeyahay, Macaan baan leeyahay, wadna-xanuun baan leeyahay, qol yarna waan ku jiraa. waxaas oo dhami waxaan aaminsanahay inay xaaladiisa caafimaad wax ku kordhin karaan, qofka naftiisu halis gasho.
Tani waxay muujinaysaa tayada iyo qiyamka xubnaha uu tilmaamay ee uu la xidhiidhay oo dhan. Nin-na muu reebin intii u masuulsanayd ee xidigaha ugu waawayn ahayd nin aanu marin oo aanu ku ooyini ma jiro. garan maayo dulmiga intaa le’eg ee uu Talaabo xukuumada loo aaneeyo ka galay. Ficilka lagula kacay isaga oo weli haysta karaamadii Wasiirnimo, waa ficil aad u fool xun. Goluu ka tirsan yahay, kuwa kale ee golahaa ku jira muraayad bay u tahay waxa talaabo ku dhacay. Isla-markaana Talaabo ayaa muraayad u ah Wasiir kastaa waxa uu ku danbayn doono”.
Wasiir ku-xigeenka Cadaaladda Yuusuf Talaabo wakhti sii horeeyay mar uu ka hadlay Siyaasiyiinta Ururka Qaran, wuxuu sheegay in Dr Gaboose iyo Maxamed Xaashi taladiisa ay ku haboon yihiin in la laayo. Wakhtigaasi labadaa nin ee uu ka hadlay way xidhnaayeen. Sidaa aawadeed, mar aanu Dr. Gaboose waydiinay sababta uu haatan ugu hadlayo wuxuu ku jawaabay; “horta Talaabo saaxiib ayaanu ahaan jirnay oo halgan dheer ayaanu soo wada marnay. Bani’aadamkuna waa isku khaldamaa, siyaasaduna way wadataa gefefkeeda. Markaa, masuuliyadaan i siinayn ninkaanu maalin isqabanaba inaan colaad u qaado. Annaga waxa nagu wayn muwaadinkayaga ku dhiban halkaa (Addis Ababa), dawladnimadeena ayay dhaawac ku tahay waxa ku dhacaya Talaabo, waxase ay su’aashu tahay, Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin muxuu kaga jawaabayaa caawa hadii uu Talaabo ku dhinto qolkaa? Muxuu Cawil kaga jawaabayaa ? Muxuu Cabdilaahi Maxamed Ducaale kaga jawaabayaa?
arrintaasi waxay muujinaysaa damqasho la’aanta taala meesha, Kuwii ugu dhawaa markuu sidaa ku samanayo, maxaad ka filaysaa inuu mucaaradka ku sameeyo?”
« Madaxwaynaha JSL oo caawa go´aan degdeg ah kasoo saaray arinta xoolaha Wakiilada Al-jaabiri oo Warbixin siiyey Golaha Wakiilada Somaliland »